ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ အိပျပြျောစမေယျ့ အကောငျးဆုံး အိပျစကျပုံအနအေထားက ဘယျဟာဖွဈမလဲ? - Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Knowledge ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ အိပျပြျောစမေယျ့ အကောငျးဆုံး အိပျစကျပုံအနအေထားက ဘယျဟာဖွဈမလဲ?
ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ အိပျပြျောစမေယျ့ အကောငျးဆုံး အိပျစကျပုံအနအေထားက ဘယျဟာဖွဈမလဲ?
အိပျစကျပုံအနအေထားတိုငျးက သငျ့အတှကျ မကောငျးပါဘူး။ ကြှနျုပျတို့ဘဝ၏ သုံးပုံတဈပုံခနျ့သညျ အိပျရေးဝဝ အိပျစကျခွငျးဖွငျ့ ကုနျဆုံးနကွေရသညျ။ အိပျစကျခွငျးသညျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ စိတျအတှကျ အလှနျအရေးကွီးပါသညျ။
တဈနညျးအားဖွငျ့ အိပျစကျခွငျးသညျ သငျ့ကိုယျသငျအတှကျ အားသှငျးနခွေငျးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အိပျရေးပကျြလြှငျ အပကျြသဘောဆောငျသညျ့ အကြိုးဆကျမြား ရှိလာနိုငျသညျ။ ၎င်းငျးသညျ သငျ၏မှတျဉာဏျ၊ အာရုံစူးစိုကျမှု၊ တုံ့ပွနျခကျြ၊ စိတျခံစားမှုနှငျ့ သငျ့ရုပျပိုငျးဆိုငျရာကနျြးမာရေးတို့ကို ထိခိုကျစနေိုငျသညျ။
ဒါကွောငျ့ အိပျစကျခွငျးက သငျ့အတှကျ ကောငျးပါတယျ။ ဒါတငျမကသေးဘဲ သငျ့ရဲ့ အိပျစကျတဲ့ အနအေထားက သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအပျေါ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ သို့မဟုတျ အပကျြသဘောဆောငျတဲ့ လှမျးမိုးမှုလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အိပျစကျဖို့ အကောငျးဆုံးအနအေထားက ဘာလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
(၁) ပကျလကျလှနျ၍ နောကျကြောဖွငျ့ အိပျစကျခွငျး
ဒါက အကနျြးမာဆုံး အနအေထားမို့လို့ သငျကံကောငျးသှားပါပွီ။ ကြောရိုးပျေါအိပျတာက ကြောရိုးကို ကောငျးမှနျစှာ ခြိနျညှိပေးတာကွောငျ့ပါ။ ဒီအနအေထားက သငျ့နောကျကြောနဲ့ လညျပငျးမှာရှိတဲ့ ကွှကျသားတှကေို အနညျးငယျ တငျးမာစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒီအနအေထားက သငျ့အသားအရအေတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ နံဘေး သို့မဟုတျ ဗိုကျမှောကျ အိပျနသေူတှလေို သငျ့မကျြနှာပျေါမှာ အရေးအကွောငျးတှေ မဖွဈတတျပါဘူး။ ဒီအနအေထားက အမြိုးသမီးတှအေတှကျလညျး ကောငျးမှနျတာကွောငျ့ ကြောပျေါမှာ အိပျတာက ရငျဘတျအောငျ့ခွငျးနဲ့ ရငျသားတှဲကခြွငျးတို့ကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ တဈခုတညျးသော အားနညျးခကျြကတော့ ဟောကျခွငျးကို ပိုဆိုးစတောပဲဖွဈပါတယျ။
ဘေးသို့စောငျးအိပျတဲ့ အလအေ့ထရှိတာက သငျတဈဦးတညျးမဟုတျပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒါက အမြားဆုံးအိပျကွတဲ့ အနအေထားဖွဈလို့ပါ။ ဘေးစောငျးအိပျတဲ့အခါ တဈဖကျကို အမွဲလှဲလြောငျးနရေတာကွောငျ့ လကျတှေ ခွထေောကျတှေ နာကငျြလာနိုငျပါတယျ။ ညာဘကျစောငျးအိပျတာက အစာမကွခွေငျးနဲ့ ရငျပူခွငျးစတဲ့ ဆိုးကြိုး‌တှကေိုဖွဈစပေါတယျ။ ဘေးစောငျးအိပျခွငျးရဲ့ ကောငျးကြိုးအနနေဲ့ကတော့ သှေးလညျပတျမှုကို ကောငျးမှနျစပွေီး ဟောကျတာကို လြော့နညျးစပေါတယျ။
(၃) ဗိုကျဖွငျ့ မှောကျလကျြအနအေထား အိပျစကျခွငျး
ဗိုကျမှောကျပွီး အိပျတတျသူတှအေတှကျ သတငျးဆိုးတဈခုရှိပါတယျ။ ဒီအနအေထားက ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျဆုံးဖွဈပါတယျ။ ခေါငျးကလုံးဝကိုလညျနတောကွောငျ့ လညျပငျးနာတာတှဖွေဈပွီး သငျ့ကြောရိုးဟာ အဆငျမပွတေဲ့ အနအေထားမှာ ရှိနမှောပါ။ အဲဒါက သငျ့အိပျခြိနျကို ပိုပွီး အနှောငျ့အယှကျဖွဈစပေါတယျ။ ကောငျးတာကတော့ ဟောကျတာကို လြော့ပါးစပေါတယျ။
ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အိပ်ပျော်စေမယ့် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်ပုံအနေအထားက ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ?
အိပ်စက်ပုံအနေအထားတိုင်းက သင့်အတွက် မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သည် အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးနေကြရသည်။ အိပ်စက်ခြင်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် အိပ်စက်ခြင်းသည် သင့်ကိုယ်သင်အတွက် အားသွင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်ရေးပျက်လျှင် အပျက်သဘောဆောင်သည့် အကျိုးဆက်များ ရှိလာနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏မှတ်ဉာဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ တုံ့ပြန်ချက်၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့် သင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့် အိပ်စက်ခြင်းက သင့်အတွက် ကောင်းပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ သင့်ရဲ့ အိပ်စက်တဲ့ အနေအထားက သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သို့မဟုတ် အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ လွှမ်းမိုးမှုလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်စက်ဖို့ အကောင်းဆုံးအနေအထားက ဘာလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
(၁) ပက်လက်လှန်၍ နောက်ကျောဖြင့် အိပ်စက်ခြင်း
ဒါက အကျန်းမာဆုံး အနေအထားမို့လို့ သင်ကံကောင်းသွားပါပြီ။ ကျောရိုးပေါ်အိပ်တာက ကျောရိုးကို ကောင်းမွန်စွာ ချိန်ညှိပေးတာကြောင့်ပါ။ ဒီအနေအထားက သင့်နောက်ကျောနဲ့ လည်ပင်းမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို အနည်းငယ် တင်းမာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီအနေအထားက သင့်အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ နံဘေး သို့မဟုတ် ဗိုက်မှောက် အိပ်နေသူတွေလို သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ အရေးအကြောင်းတွေ မဖြစ်တတ်ပါဘူး။ ဒီအနေအထားက အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်း ကောင်းမွန်တာကြောင့် ကျောပေါ်မှာ အိပ်တာက ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းနဲ့ ရင်သားတွဲကျခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသော အားနည်းချက်ကတော့ ဟောက်ခြင်းကို ပိုဆိုးစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးသို့စောင်းအိပ်တဲ့ အလေ့အထရှိတာက သင်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါက အများဆုံးအိပ်ကြတဲ့ အနေအထားဖြစ်လို့ပါ။ ဘေးစောင်းအိပ်တဲ့အခါ တစ်ဖက်ကို အမြဲလှဲလျောင်းနေရတာကြောင့် လက်တွေ ခြေထောက်တွေ နာကျင်လာနိုင်ပါတယ်။ ညာဘက်စောင်းအိပ်တာက အစာမကြေခြင်းနဲ့ ရင်ပူခြင်းစတဲ့ ဆိုးကျိုး‌တွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဘေးစောင်းအိပ်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးအနေနဲ့ကတော့ သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး ဟောက်တာကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
(၃) ဗိုက်ဖြင့် မှောက်လျက်အနေအထား အိပ်စက်ခြင်း
ဗိုက်မှောက်ပြီး အိပ်တတ်သူတွေအတွက် သတင်းဆိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီအနေအထားက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းကလုံးဝကိုလည်နေတာကြောင့် လည်ပင်းနာတာတွေဖြစ်ပြီး သင့်ကျောရိုးဟာ အဆင်မပြေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေမှာပါ။ အဲဒါက သင့်အိပ်ချိန်ကို ပိုပြီး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကောင်းတာကတော့ ဟောက်တာကို လျော့ပါးစေပါတယ်။